ချစ်သူစုံတွဲတွေ ရုပ်ချင်းဆင်လာကြတာ ဘာလို့လဲဆိုတော့…💕 – Trend.com.mm
Posted on September 3, 2018 September 3, 2018 by Noel
နှစ်ချီလက်တွဲလာတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတစ်ချို့ကိုကြည့်လိုက်ရင် နှစ်ယောက်သား ရုပ်ချင်းဆင်နေတာကိုသတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။နှစ်ချီမဟုတ်တောင်တစ်နှစ် နှစ်နှစ်နီးပါးချစ်သူသက်တမ်းရှိနေပြီဆို ဘေးကမြင်နေရတဲ့လူတွေက ဒီနှစ်ယောက်ရုပ်ချင်းဆင်နေတာ၊အပြုအမူတွေ၊စကားပြောပုံတွေဆင်လာတာအကဲခတ်မိပါလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့် ဘာလို့ချစ်သူစုံတွဲတွေရုပ်ချင်းဆင်လာကြတာလဲ?သိချင်လာပြီဟုတ် ! 😉
Michigan တက္ကသိုလ်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာသူပညာရှင် Robert Zajonc ဟာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကာစဇနီးမောင်နှံရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ နောက်ထပ် ၂၅နှစ်အကြာမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ ထိုဇနီးမောင်နှံဟာ ရုပ်ချင်းပိုတူလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ထိုဇနီးမောင်နှံရုပ်ချင်းပိုဆင်လာရတဲ့အကြောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ပျော်နေတဲ့အချိန် ကိုယ်ပါလိုက်ပြီးပျော်မိလို့ စိတ်ခံစားချက်တွေကလည်းဆင်တူလာပါတယ်။ချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ယောက်သား လျှောက်သွားလည်းအတူတူ၊စားလည်းအတူတူ၊၀ိတ်လျှော့လည်းအတူတူ၊၀ါသနာပါတာတွေလည်း တစ်ယောက်တစ်လှည့်လိုက်လုပ်ကြ၊ပျော်စရာတွေလုပ်လည်းအတူတူ၊ငိုလည်းအတူတူဖြစ်လို့ ရုပ်ပါတဖြည်းဖြည်းဆင်လာတာပါတဲ့။နောက်တစ်နည်းပြောရရင် အစကတည်းက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သဘောကျနှစ်သက်ပြီးဖြစ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ယောက်သား အမူအကျင့်တွေပါဆင်တူလာပြီး ရုပ်ချင်းပါစပြီးဆင်တူလာတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ၂၅နှစ်ကြာတဲ့အထိ အတူတူရှိနေရင် ရုပ်ချင်းပိုတူလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တစ်ယောက်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းကအစ နေရာချင်းတူလာနိုင်ပါတယ်တဲ့ 😮
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ချစ်သူတွေမဖြစ်ခင်ကတည်းက တစ်ယောက်ယောက်ကိုစချစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူက ကိုယ်နဲ့အမူအကျင့်၊အကျင့်စရိုက်တူညီလို့ ချစ်မိတာများပါတယ်။တစ်ခြားသူတွေဘယ်လောက်ချောချော ကိုယ်နဲ့အကျင့်စရိုက်ချင်းအမူအကျင့်ချင်းတူညီတဲ့သူကိုပဲ ပိုပြီးစိတ်ထဲက သဘောကျတတ်တာပါ။ပြီးတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကမှန်လိုပါပဲတဲ့။တစ်ယောက်က ဒီအကျင့်တစ်ခုကိုစလုပ်ပြီဆို နောက်တစ်ယောက်ကလည်း အဲ့ဒီအကျင့်မျိုး လုပ်မိတတ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့တူတဲ့အမူအရာမျိုးလည်း လိုက်လုပ်ရင်းနှစ်ယောက်သားပိုတူလာတာမျိုးပေါ့ 💕
ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာ ဒီလိုမျိုးခံစားချက်တွေ၊အတွေ့အကြုံတွေ Sharing လုပ်ရင်း လက်တွဲလာတာအချိန်ကြာလေလေ ရုပ်ချင်းပိုဆင်လာလေပါပဲ 💑
နှဈခြီလကျတှဲလာတဲ့ခဈြသူစုံတှဲတဈခြို့ကိုကွညျ့လိုကျရငျ နှဈယောကျသား ရုပျခငျြးဆငျနတောကိုသတိထားမိကွပါလိမျ့မယျ။နှဈခြီမဟုတျတောငျတဈနှဈ နှဈနှဈနီးပါးခဈြသူသကျတမျးရှိနပွေီဆို ဘေးကမွငျနရေတဲ့လူတှကေ ဒီနှဈယောကျရုပျခငျြးဆငျနတော၊အပွုအမူတှေ၊စကားပွောပုံတှဆေငျလာတာအကဲခတျမိပါလိမျ့မယျ။ဒါဖွငျ့ ဘာလို့ခဈြသူစုံတှဲတှရေုပျခငျြးဆငျလာကွတာလဲ?သိခငျြလာပွီဟုတျ !
Michigan တက်ကသိုလျက စိတျပိုငျးဆိုငျရာလလေ့ာသူပညာရှငျ Robert Zajonc ဟာ မင်ျဂလာဆောငျပွီးကာစဇနီးမောငျနှံရဲ့ ဓာတျပုံနဲ့ နောကျထပျ ၂၅နှဈအကွာမှာရိုကျထားတဲ့ဓာတျပုံနှဈပုံကို ယှဉျကွညျ့တဲ့အခါ ထိုဇနီးမောငျနှံဟာ ရုပျခငျြးပိုတူလာတာကိုတှခေဲ့ရပါတယျ။အဲ့ဒါကိုအသေးစိတျလလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ ထိုဇနီးမောငျနှံရုပျခငျြးပိုဆငျလာရတဲ့အကွောငျးကိုရှာတှခေဲ့ပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောပြျောနတေဲ့အခြိနျ ကိုယျပါလိုကျပွီးပြျောမိလို့ စိတျခံစားခကျြတှကေလညျးဆငျတူလာပါတယျ။ခဈြသူတှဖွေဈတဲ့အတှကျ နှဈယောကျသား လြှောကျသှားလညျးအတူတူ၊စားလညျးအတူတူ၊၀ိတျလြှော့လညျးအတူတူ၊၀ါသနာပါတာတှလေညျး တဈယောကျတဈလှညျ့လိုကျလုပျကွ၊ပြျောစရာတှလေုပျလညျးအတူတူ၊ငိုလညျးအတူတူဖွဈလို့ ရုပျပါတဖွညျးဖွညျးဆငျလာတာပါတဲ့။နောကျတဈနညျးပွောရရငျ အစကတညျးက တဈယောကျကိုတဈယောကျ သဘောကနြှဈသကျပွီးဖွဈလို့ နောကျပိုငျးမှာနှဈယောကျသား အမူအကငျြ့တှပေါဆငျတူလာပွီး ရုပျခငျြးပါစပွီးဆငျတူလာတာဖွဈပါတယျ။ခဈြသူတှဖွေဈပွီး ၂၅နှဈကွာတဲ့အထိ အတူတူရှိနရေငျ ရုပျခငျြးပိုတူလာတာကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။တဈယောကျမကျြနှာမှာရှိတဲ့အရေးအကွောငျးကအစ နရောခငျြးတူလာနိုငျပါတယျတဲ့ 😮
နောကျတဈခကျြကတော့ ခဈြသူတှမေဖွဈခငျကတညျးက တဈယောကျယောကျကိုစခဈြပွီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူက ကိုယျနဲ့အမူအကငျြ့၊အကငျြ့စရိုကျတူညီလို့ ခဈြမိတာမြားပါတယျ။တဈခွားသူတှဘေယျလောကျခြောခြော ကိုယျနဲ့အကငျြ့စရိုကျခငျြးအမူအကငျြ့ခငျြးတူညီတဲ့သူကိုပဲ ပိုပွီးစိတျထဲက သဘောကတြတျတာပါ။ပွီးတော့ ခဈြသူစုံတှဲတှကေမှနျလိုပါပဲတဲ့။တဈယောကျက ဒီအကငျြ့တဈခုကိုစလုပျပွီဆို နောကျတဈယောကျကလညျး အဲ့ဒီအကငျြ့မြိုး လုပျမိတတျပါတယျ။တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့တူတဲ့အမူအရာမြိုးလညျး လိုကျလုပျရငျးနှဈယောကျသားပိုတူလာတာမြိုးပေါ့ 💕
ခဈြသူစုံတှဲတှဟော ဒီလိုမြိုးခံစားခကျြတှေ၊အတှအေ့ကွုံတှေ Sharing လုပျရငျး လကျတှဲလာတာအခြိနျကွာလလေေ ရုပျခငျြးပိုဆငျလာလပေါပဲ 💑